Welcome | Monnect
Your Business Lifeline in Myanmar
1st Myanmar Microfilm Contest 2015
2015 Prize Awarding Ceremonary
2nd Myanmar Microfilm Contest 2016
Monnect Group သည်GLOBAL CAMP MEDIA GROUP ၏ မြန်မာနိုင်ငံရှိတခုတည်းသော ကုမ္ပဏီခွဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီကို ၂၀၁၄ တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မဟာဗျူဟာမြောက်သည့် မီဒီယာ ၀န်ဆောင်မှု များဖြင့် အမျိုးမျိုးသော မီဒီယာလမ်းကြောင်းကိုတီထွင်ဖန်တီးမှုများစွာ အသုံးပြုကာကြော်ငြာ ပေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ပြပွဲများ၊ကုန်စည်ပြပွဲများ၊ စီးပွားဖြစ်ဖျော်ဖြေပွဲများ နိုင်ငံတကာအားကစား အစီ အစဉ်များ ၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရုပ်ရှင်၊ အင်တာနက် နှင့် အခြားသောရုပ်သံ Channel များထိ ပျံ့နှံ့ဝင်ရောက် ပေါက်မြောက် အောင် တစ်နေရာတည်းတွင်အပြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် One-stop media strategy services ကို ပေးနိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် မဟာဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ မှာမြန်မာပြည်တွင်း တွင်သာမက နိုင်ငံတကာများတွင်လည်းရှိနေသောကြောင့် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းများကိုလည်း နိုင်ငံတကာတွင် ချပြနိုင်သော အခွင့်အရေးလည်းရှိပါသည်။ သာဓကအားဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကျွန်ပ်တို့သည် ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ထိုင်း နိုင်ငံ T-POP ပွဲတော်နှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ PGA Championship ကိုပူးတွဲကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းပွဲတော်နှစ်ခု လုံးမှာ စီးပွာရေးအရအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ရုံသာမက လူမှုရေးနယ်ပယ်များတွင်ပါ အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့ရသည်။ ထို့အတူ များမကြာသေးမီကာလက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးကျင်းပသော Myanmar Youth Micro Film Contest ကြီးကိုလည်း အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။(www.facebook.com/myanmarmicrofilm)
ကျွန်ပ်တို့သည် ကျွန်ပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အတူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တူညီသော အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု နှင့် တူညီသောပန်းတိုင်ကို ကျွန်ပ်တို့အတူတကွတက်လှမ်းကာ ကျွန်ပ်တို့၏ consumers နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း အတွက် တန်ဖိုးထားမှုကို မြင့်တက်လာအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြပါစို့။
As the branch company of Global CAMG(Australla) in Myanmar, MONNECT has strategic partners both domestically in Myanmar and internationally. The Global CAME Group family hasalarge working team throughout the Asia-Pacific Region via its subsidiaries in New Zealand, Korea, China, Thailand, and Indonesia, as well as Sri Lanka, Mongolia, Afghanistan, Nepal, etc, Running nearly 100 radio frequencies and TV channels, Internet, social media, print media, and so on. This made us capable fo carrying out all kinds of media business and activities in these countries. For Instance, In 2014, we proudly co-hosted T-POP Festival In Thailand and the Australlan PGA Championship, and Support Myanmar stage show in 2015, all of which gained not only economic but also social benefits.
Founded in 2014 and headquartered in Australla. Monnect has established itself asalocal media group through local and international multi-media platform. Asapractitioner in the booming creative media in Myanmar, we are proud of every positive change we have brought to our client through expert solutions. It is our aspiration not just to achieve the stature of our client, but also to help our client to reach their goal in Myanmar.
No (53), Strand Road, Strand Square, Room (05-05),
(Between 32nd Street & Bo Soon Pat Road)
Mobile No. +95-1-2307399
Copyright © 2015 - 2021 Monnect Co., Ltd. All rights reserved.